ओलीवि’रुद्ध लड्न मलाई घचेटेर अघि बढाए, पछि फर्केर हेर्दा कोही पनि छैन :- माधव नेपाल ! – Nepal Online Khabar
ओलीवि’रुद्ध लड्न मलाई घचेटेर अघि बढाए, पछि फर्केर हेर्दा कोही पनि छैन :- माधव नेपाल !
भाद्र १२, २०७८ शनिबार 1733
काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीवि’रुद्धको ल’डाइमा अघि सार्नेहरुलाई पछि फर्केर हेर्दा खुट्टा कमाएर भागेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘ओलीवि’रुद्धको ल’डाइँमा मलाई घचेटेर अगाडि बढ भने तर मैले पछाडि हेर्दा त कोही पनि छैन। सबै खुट्टा कमाएर हिँडिसकेछन् ।’ ओलीवि’रुद्धको ल’डाइमा तीनै नेताहरुले भनेबमोजिम कदम चालेको र, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सफल पनि भएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘ओलीवि’रुद्धको लडाइँमा अगाडि बढ्नोस् जोसुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ तर केपी ओलीलाई फाल्नै पर्छ भनेका थिए । उनीहरुले भनेपछि ओलीलाई संसदबाटै फाल्न म लागेकै हो। सडकबाट फाल्न नसकिने भएकाले संसदको गतिविधिमा भाग नलिएर बहिष्कार गर्‍यौँ। त्यहीकारण ओलीले सत्ता पनि छाड्नुपर्यो।’
तर, अध्यक्ष नेपालले भने एमाले विभाजनलाई एउटा सामान्य घटना भनेर भनेका छन् । साथै, राजनीतिक जीवनमा कहिलकाहीँ उतारचढाव हुने उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘एउटा व्यक्तिको राजनीतिक जीवनमा यस्ता घ’टना परिघटना भइरहन्छन्। केही केही व्यक्तिहरु पार्टी विभाजित हुँदा रमाउँछन्, नाच्छन्,भोज खान्छन् ।’
गलत विचार र प्रवृत्तिविरुद्ध जुध्ने सबै ढोका बन्द भएपछि वि’द्रोह गर्नुपरेको पनि नेपालले बताएका छन्। उनले भनेका छन्,‘केपी ओलीमा सुधारका कुनै लक्षण नभएपछि, प्रतिगमनबाट पछि हट्ने संकेत नदेखिएपछि वि’द्रोह गरेका हौँ ।’
उनले आफू ओलीजसरी पदमा नबस्ने पनि बताएका छन् । ‘पुष्पलालले केशरजंगसँग वि’द्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाए। हामीले पनि पुष्पलाललाई पनि छाड्यौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘एक कार्यकालभन्दा बढी म पार्टीअको अध्यक्ष पदमा बस्ने छैन। अरु जस्तो नक्कली छैन। एउटा कार्यकाल मात्रै बस्छु, ओली जस्तो होइन।’
Prevबिरामी हिड्ने बाटो सफा नगर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष स्थानीयले समाते क’ठालो
Nextएमालेसँग एक्लै लड्न कसैले सक्दैन : ओली !
गुरिल्ला सभामुखले अवैध अधिकार प्रयोग गरेर द्वन्द्वकालको झझल्को दिए : महेश बस्नेत !